UKhune ugeze umqeqeshi ubebebe - Ilanga News
Home Ezemidlalo UKhune ugeze umqeqeshi ubebebe
UKhune ugeze umqeqeshi ubebebe
Ubashiye bengawuvali umlomo kwiDStv Compact Cup
ISITHANDWA sabalandeli beKaizer Chiefs, uItumeleng Khune (osesithombeni) sigeze ubebebe umqeqeshi ebesiqala ukusebenzisana naye, sikhombisa isipiliyoni esiphindiwe emdlalweni omqoka. UKhune uqokwe ngabalandeli ukudlala kwiDStv Compact Cup eqalayo ukudlalelwa kulo nyaka njengoba kuqhubeka i-Africa Cup of Nations (Afcon) eCameroon, okwenze yathi gozololo imidlalo yePremier Soccer League (PSL). Useqenjini iWarriors elidlulele kowamanqamu libhuquzisa AmaButho FC ngo-2-1 kwisemi final yesibili yalo mqhudelwano. Le midlalo yamasemi final ibingoMgqibelo eMoses Mabhida Stadium, eThekwini. Kweyokuqala kunqobe iCoastal United ihlula iDinaledi ngo-3-0.
IWarriors izoshukana kowamanqamu neCoastal ngoMgqibelo ngo-15h00 eFNB Stadium, eGoli. Ozonqoba uzothola uR1 million. Lo mdlalo uzobhulelwa amazolo ngabazobanga indawo yesithathu neyesine, iDinaledi namaButho. IWarriors ilolongwa nguDylan Kerr oqalayo ukusebenzisana noKhune oselizwa ngendaba ijezi kwiChiefs njengoba selijwayele ukutholwa nguDaniel Akpeyi waseNigeria okwi Afcon. UKerr utshele abezindaba emuva kokuba ezakhe zingene kowamanqamu ukuthi namanje usamangele ukuthi kungani uKhune eqiwa yijezi kwiChiefs kwazise usengumdlali onakho konke okudingeka kunozinti. Uthi indlela akhombise ngayo isipiliyoni ezintini iyamangalisa.
“Ngiyabahlonipha abaqeqeshi beChiefs ngoba yibona abaziyo ukuthi kungani uKhune engadlali. Kepha ngokwami unakho konke okudingeka kunozinti. Ungidlalele kahle kakhulu, ubenika abadlali bami ithemba ngokudlala ngokuthembeka ezintini. “Bekumele siwunqobe lo mdlalo ngoba ngaphandle nje kukaKhune owenze umsebenzi omuhle, nozakwabo badlale kahle kakhulu. “Indlela aziphethe ngayo ngaphakathi nangaphandle kwenkundla iyamangalisa. “Uyabonakala nje ukuthi ungumholi woqobo. Wenza umsebenzi wethu ubelula njengabaqeqeshi. Kuningi okwenziwe ngabadlali ejimini kulezi zinsuku ezimbili esibe nazo nabo,” kushom uKerr obebonakala ngesikhathi somdlalo ukuthi ufuna ezakhe zidlulele kowamanqamu.
ULehlohonolo Seema obehola AmaButho FC ngokubambisana noJohn Maduka, uthe yize bedlale kahle kepha bebeqondene neqe mbu elinzima. Uthi unethemba lokuthi emdlalweni olandelayo abadlali bakhe bazokube sebejwayelene kangcono. Nakuba iqhubekile le midlalo kodwa okuqaphelekile wukungabonakali kuka Ernest Middendorp obekumele ahole AmaButho FC, nokulimala kwabadlali abaningi abagcine bengazange besaba yingxenye yale midlalo
Previous articleIkhehla (75) “lidubule labulala” isalukazi (69)
Next articleBakhathazekile ngonyamalele